Murume Nomukadzi Nomwana - Shoko Shoko • Dzidza pamusoro penyu
Bhuku iri rinoshamisa, rakanyorwa chete, rinozarura vistas muminda iyo yakave yakazara mumusana kwemazana emakore. Pano iwe uchanzwa kuti danho rokutanga kuenda kuzvarwa patsva kwekunamata ndiko kunzwisisa kunama kwevanhu mumitumbi inofa yekuzvarwa nekufa. Pano, iwewo, iwe uchadzidzira kuti ndeupi chaiye-iwe unozviziva mumuviri-uye kuti iwe ungaputsa sei kunyengedzera kushandura mafungiro ako nekufunga zvakakanda pamusoro pako kubva pauduku. Iwe uchanzwisisa, kuburikidza nechiedza chekufunga kwako, nei munhu ari murima pamusoro pekubva kwake uye pakupedzisira kuguma. Pakutanga kwehupenyu hwomuviri mutsva, huri kukura, hunozviziva hunoita kuti magadzirirwo emagariro ekufunga, manzwiro, uye kuchida. Inonzwisiswa nemanzwiro ayo, zvishoma nezvishoma inozviratidza zvachose nemuviri wayo uye inorasikirwa neicho chechokwadi, chizivikanwe chisingaperi. Munhu anenge asingachadikani, achiziva zvenhema nezvekufa kwake, kazhinji anoshaya mukana wekuwana nzvimbo yakakodzera muCosmos uye haagoni kuzadzisa chinangwa chake chikuru. Murume Nomukadzi uye Mwana inoratidza kuti ingashandisa sei mukana iwoyo weUkuzviwana!
Verenga Murume Nomukadzi uye Mwana
"Kutaura uku hakusi maererano netariro dzenhema. Vanosimbiswa nehutachiona, hwepanyama, hwehupenyu uye hwepfungwa huchapupu hwakapiwa pano, izvo zvaunokwanisa, kana uchida, kuongorora, kuongorora uye kutonga; uye, ita izvo zvaunofunga zvakanakisisa. " HW Percival